Amadlozi – iAfrika
Ngokosiko lwesiZulu ukugcagca kuqala uyihlo wakho ebe engakagcagci akuvumelekile ngoba lokho kokhokho bakho kusho ukuthi nguwena osuyindoda, okwenza kube sengathi umuzi wakini usungowakho, okungasho ukuthi uyihlo yena useyingane. Ngenxa yaleso sizathu kuyaye kuthiwe uma usufuna ukugcagcelwa, kumelwe kuqale uyihlo kuqala, uma engasekho esadlula emhlabeni engagcagcanga kumelwe uqale ngokwenzela uyihlo usiko olumelele ukugcagca bese kuthi kamuva-ke … Read more
Tags Amadlozi, Impepho, Ukugcagca
Ukuhlambulula idlozi ngokwenkolo yamaNazaretha
Ngibe nengxoxo noMnumzane uBongani Dube owazalwa ngowe-1963, umhla we-11 kuLwezi, ezalelwa endaweni yaseNdwedwe esigodini sakwaHlophe eduze nomuzi wakwaShembe, Ehhomisi. UMnumzane uBongani Dube manje usehlala endaweni yaseNanda, eCongo. Ukuhlambulula izidalwa noma idlozi yilapho usuke ugeza khona abantu bakini abangasekho emhlabeni. Ngokwenkolo yamaNazaretha kuthiwa uyazihlambulula. Inhloso yokuthi izidalwa zihlanjululwe wukuba zize kahle kumuntu, kuthi uma ngabe enza … Read more
Tags Amadlozi, Shembe, Ukuhlambulula
Uma uphupha ukuthi ubona amadlozi uzobhekana nenkathazo empilweni wakho maduzane.